ချစ်သူနှစ်ဦးကြားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိရမယ်ဆိုပေမဲ့ ဒီအရာတွေကိုတော့ လျှို့ဝှက်ထားသင့်🤫 – Trend.com.mm
ချစ်သူနှစ်ဦးကြားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိရမယ်ဆိုပေမဲ့ ဒီလိုအချက်တွေကိုပြောမပြတာက အချစ်ရေးမှာဆူးညှောင့်ခလုတ်မဖြစ်အောင်ကြိုတင်ဖယ်ရှားလိုက်တာပါပဲ။ကိုယ့်ရဲ့ ၂၄နာရီလုံးဘာလုပ်တယ်၊ဘာဖြစ်တယ်။ဘယ်သူကတော့ဘယ်လိုစသဖြင့်အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကို ပြောပြဖို့မလိုပါဘူး။သူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူ ပြောပြသင့်သလောက် ဖုံးကွယ်သင့်သလောက်ပေါ့။ဒါမှ အချစ်ရေးကို Balance ဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်မှာပါ။ဒီတော့ကိုယ့်ချစ်သူကို ဘယ်လိုအချက်တွေကိုမပြောပြသင့်ဘူးလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်….
*ကိုယ့်ကို ဘယ်သူတွေကတော့ ခရက်ရ်ှနေတယ်ဆိုတာမျိုး…
ဒီလိုကိုယ့်ကိုဘယ်သူကတော့ ကြိုက်နေပါတယ်၊ချစ်နေပါတယ်ဆိုတာမျိုးက မပြောပြသင့်ပါဘူးတဲ့။ဒီလိုပြောပြတာက ကိုယ့်ချစ်သူကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သလို မလိုအပ်တဲ့သံသယတွေပွားများလာစေပါတယ်။အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ကိုခရက်ရ်ှနေတဲ့သူက ရုပ်ချောတယ်၊ချမ်းသာတယ်စသဖြင့်ပြောပြနေတယ်ဆိုရင် မလိုအပ်တဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိရပါ။
အမှန်တော့ဒါတွေကို ကိုယ့်ချစ်သူကသိစရာတော့မလိုပါဘူး။ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်အမြဲလှနေအောင် ဘယ်လိုသထားတယ်ဆိုတာ အသေးစိတ်ပြောပြတာထက် ကျန်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူ့ကို မျှဝေတာပိုကောင်းပါတယ်။ကိုယ်ကပြောရတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တောင်
သူ့အနေနဲ့ကျတော့ ကိုယ်နဲ့မရင်းနှီးမသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်နေမှာပါ။ဒီတော့ အချိန်တွေကုန်တာပဲအဖတ်တင်မှာဖြစ်သလို အမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့အလှအပရေးရာလျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြနေတာမျိုးက သူ့အတွက်လည်း စိတ်သက်တောင့်သက်သာမဖြစ်စေပါဘူး။
*Cyberstalking လုပ်နေတာကို ပြောပြတာမျိုး
ကိုယ့်ချစ်သူ ကိုယ့်နောက်ကွယ်မှာဘာတွေလုပ်နေလဲ မိန်းကလေးတိုင်းလိုလိုသိချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ မသိသာစေနဲ့ပေါ့။သူ့ဝေါလ်ထဲကိုဝင်မွှေ၊သူ့ဖုန်းတွေလိုက်စစ်ပြီး သူ့ရဲ့အရင်ရည်းစားနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေသေးလား၊တစ်ခြားတစ်ယောက်နဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေလဲစသဖြင့် စစ်ဆေးရှာ
ဖွေမွှေနှောက်ပြီး ငါအကုန်သိတယ်နော်ဆိုတဲ့အထာမျိုးနဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါ စကားလမ်းကြောင်းရှာဖွေ၊အစ်အောက်မေးနေတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။စစ်ဆေးတာကစစ်ဆေးပါ။ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒါကိုသူသိအောင်ပြောပြနေတာက သင်သူ့အပေါ်သ၀န်တိုနေတယ်။အယုံအကြည်ကင်းမဲ့နေတယ်၊သံသယတွေများနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူမှတ်ယူသွားနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုဆို နှစ်ယောက်ကြားမှာအဖုအထစ်လေးတွေစပြီးဖြစ်လာမှာအမှန်ပါပဲ။
တကယ်လို့ ကိုယ့်မိသားစုက ကိုယ့်ချစ်သူကိုသဘောမကျဘူး။အကောင်းမမြင်ဘူးဆိုရင် ဒီလိုအကြောင်းအရာမျိုးကို ချစ်သူကိုမပြောပါနဲ့။ဘယ်သူက ကိုယ့်ကိုသဘောမကျဘူးဆိုတာမျိုးကြားချင်မှာလဲ။ပြောပြလိုက်လို့ သူတို့က ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တောင် နောက်ပိုင်းကျရင် ဒီအကြောင်းအရာ
တွေကပါ ကိုယ်တွေရဲ့ အချစ်ရေးကို နှောင့်ယှက်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် အကောင်းမမြင်တဲ့စကားတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိရမယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ချစ်သူကိုမပြောပြပါနဲ့။
*ကိုယ် ဒါမှမဟုတ် သူ ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာတာကိုပြောတာမျိုး
၀လာတယ်နော်၊၀ိတ်လျှော့ဦး။ပိန်သွားတယ်နော် စတဲ့စကားတွေက တစ်ခြားသူတွေကို မပြောသင့်သလို ကိုယ့်ချစ်သူကိုလည်းမပြောသင့်ပါဘူး။ကိုယ်က အလေးချိန်တက်လာတယ်ဆိုရင်လည်းမပြောပါနဲ့။ကိုယ့်ဘာသာကြိုးစားပြီးပြန်ချပါ။အားလုံးက ကိုယ့်ချစ်သူကိုအလှဆုံးဖြစ်စေချင်သလို တစ်ချို့ကတော့ ကိုယ့်ချစ်သူဝလာရင် စိတ်ပျက်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝလာတယ် ကိုယ်သိရင်ကြိုးစားပြီးပြန်ချပါ။သူဝလာတာဆိုရင်လည်း သူ့ကိုဝလာတယ်တိုက်ရိုက်ပြောတာထက် gym အတူတူသွားကစားကြမလားတို့၊အားကစားတစ်ခုခုလုပ်ကြမလားလို့စသဖြင့် သွယ်ဝိုက်ပြီးပြောပေါ့။အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ ၀လာတယ်ချည်းခဏခဏပြောနေရင် သူ့ဘက်ကစိတ်အားငယ်တာတွေ၊စိတ်ဓာတ်ကျတာတွေ၊ကိုယ့်အပေါ် စိတ်ခုတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါမျိုးကျတော့ သွယ်ဝိုက်ပြီးပြောတတ်ရတာပေါ့။ကိုယ်အလေးချိန်တက်တယ်ဆိုတာ ကျန်းမာရေးနဲ့မှ မညီညွတ်ပဲ။
လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတာ သူ့နေရာနဲ့သူထားသင့်ပါတယ်။ကိုယ်ပြောမယ့်စကားက နှစ်ယောက်လုံးအတွက်အကျိုးမရှိဘူးဆိုရင် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခံပြီးဘာလို့ပြောပြတော့မှာလဲ မဟုတ်ဘူးလား? ပွင့်လင်းတိုင်းလည်း အချစ်ရေးကိုမပျက်စီးအောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။တစ်ခါတစ်လေ မလိုအပ်တဲ့စကားတွေအများကြီးပြောမိတာကလည်း အချစ်ရေးကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ် 💕ပြီးတော့ ဒါတွေက လိမ်ညာပြီးဖုံးကွယ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။မလိုအပ်တာတွေပြောမိပြီး အချစ်ရေးကိုအဖုအထစ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ ကြိုတင်ကာကွယ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခဈြသူနှဈဦးကွားပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးရှိရမယျဆိုပမေဲ့ ဒီလိုအခကျြတှကေိုပွောမပွတာက အခဈြရေးမှာဆူးညှောငျ့ခလုတျမဖွဈအောငျကွိုတငျဖယျရှားလိုကျတာပါပဲ။ကိုယျ့ရဲ့ ၂၄နာရီလုံးဘာလုပျတယျ၊ဘာဖွဈတယျ။ဘယျသူကတော့ဘယျလိုစသဖွငျ့အကွောငျးအရာတှအေားလုံးကို ပွောပွဖို့မလိုပါဘူး။သူ့အတိုငျးအတာနဲ့သူ ပွောပွသငျ့သလောကျ ဖုံးကှယျသငျ့သလောကျပေါ့။ဒါမှ အခဈြရေးကို Balance ဖွဈအောငျထိနျးနိုငျမှာပါ။ဒီတော့ကိုယျ့ခဈြသူကို ဘယျလိုအခကျြတှကေိုမပွောပွသငျ့ဘူးလဲဆိုတာ ကွညျ့လိုကျရအောငျ….
*ကိုယျ့ကို ဘယျသူတှကေတော့ ခရကျရျှနတေယျဆိုတာမြိုး…
ဒီလိုကိုယျ့ကိုဘယျသူကတော့ ကွိုကျနပေါတယျ၊ခဈြနပေါတယျဆိုတာမြိုးက မပွောပွသငျ့ပါဘူးတဲ့။ဒီလိုပွောပွတာက ကိုယျ့ခဈြသူကိုစိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈစနေိုငျသလို မလိုအပျတဲ့သံသယတှပှေားမြားလာစပေါတယျ။အထူးသဖွငျ့ ကိုယျ့ကိုခရကျရျှနတေဲ့သူက ရုပျခြောတယျ၊ခမျြးသာတယျစသဖွငျ့ပွောပွနတေယျဆိုရငျ မလိုအပျတဲ့ပွဿနာတှအေမြားကွီးဖွဈလာနိုငျတယျဆိုတာ သတိရပါ။
အမှနျတော့ဒါတှကေို ကိုယျ့ခဈြသူကသိစရာတော့မလိုပါဘူး။ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျအမွဲလှနအေောငျ ဘယျလိုသထားတယျဆိုတာ အသေးစိတျပွောပွတာထကျ ကနျြးမာရေးနဲ့သကျဆိုငျတဲ့အကွောငျးအရာတှကေိုသူ့ကို မြှဝတောပိုကောငျးပါတယျ။ကိုယျကပွောရတာဘာမှမဖွဈဘူးဆိုရငျတောငျ
သူ့အနနေဲ့ကတြော့ ကိုယျနဲ့မရငျးနှီးမသကျဆိုငျတဲ့အကွောငျးအရာတဈခုဖွဈနမှောပါ။ဒီတော့ အခြိနျတှကေုနျတာပဲအဖတျတငျမှာဖွဈသလို အမွဲတမျးကိုယျ့ရဲ့အလှအပရေးရာလြှို့ဝှကျခကျြတှနေဲ့ပတျသကျလို့ပွောပွနတောမြိုးက သူ့အတှကျလညျး စိတျသကျတောငျ့သကျသာမဖွဈစပေါဘူး။
*Cyberstalking လုပျနတောကို ပွောပွတာမြိုး
ကိုယျ့ခဈြသူ ကိုယျ့နောကျကှယျမှာဘာတှလေုပျနလေဲ မိနျးကလေးတိုငျးလိုလိုသိခငျြပါတယျ။ဒါပမေဲ့ မသိသာစနေဲ့ပေါ့။သူ့ဝေါလျထဲကိုဝငျမှေ၊သူ့ဖုနျးတှလေိုကျစဈပွီး သူ့ရဲ့အရငျရညျးစားနဲ့အဆကျအသှယျရှိနသေေးလား၊တဈခွားတဈယောကျနဲ့ဘယျလိုအခွအေနတှေဖွေဈနလေဲစသဖွငျ့ စဈဆေးရှာ
ဖှမှေနှေောကျပွီး ငါအကုနျသိတယျနျောဆိုတဲ့အထာမြိုးနဲ့ ကိုယျ့ခဈြသူနဲ့တှတေဲ့အခါ စကားလမျးကွောငျးရှာဖှေ၊အဈအောကျမေးနတောမြိုးမလုပျပါနဲ့။စဈဆေးတာကစဈဆေးပါ။ဒါပမေဲ့ အဲ့ဒါကိုသူသိအောငျပွောပွနတောက သငျသူ့အပျေါသဝနျတိုနတေယျ။အယုံအကွညျကငျးမဲ့နတေယျ၊သံသယတှမြေားနတေယျဆိုတဲ့သဘောမြိုးသူမှတျယူသှားနိုငျပါတယျ။ဒီလိုဆို နှဈယောကျကွားမှာအဖုအထဈလေးတှစေပွီးဖွဈလာမှာအမှနျပါပဲ။
တကယျလို့ ကိုယျ့မိသားစုက ကိုယျ့ခဈြသူကိုသဘောမကဘြူး။အကောငျးမမွငျဘူးဆိုရငျ ဒီလိုအကွောငျးအရာမြိုးကို ခဈြသူကိုမပွောပါနဲ့။ဘယျသူက ကိုယျ့ကိုသဘောမကဘြူးဆိုတာမြိုးကွားခငျြမှာလဲ။ပွောပွလိုကျလို့ သူတို့က ဘာမှမဖွဈဘူးဆိုရငျတောငျ နောကျပိုငျးကရြငျ ဒီအကွောငျးအရာ
တှကေပါ ကိုယျတှရေဲ့ အခဈြရေးကို နှောငျ့ယှကျနိုငျပါတယျ။ဒါကွောငျ့ အကောငျးမမွငျတဲ့စကားတှကေို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးရှိရမယျဆိုပွီး ကိုယျ့ခဈြသူကိုမပွောပွပါနဲ့။
*ကိုယျ ဒါမှမဟုတျ သူ ကိုယျအလေးခြိနျတကျလာတာကိုပွောတာမြိုး
ဝလာတယျနျော၊၀ိတျလြှော့ဦး။ပိနျသှားတယျနျော စတဲ့စကားတှကေ တဈခွားသူတှကေို မပွောသငျ့သလို ကိုယျ့ခဈြသူကိုလညျးမပွောသငျ့ပါဘူး။ကိုယျက အလေးခြိနျတကျလာတယျဆိုရငျလညျးမပွောပါနဲ့။ကိုယျ့ဘာသာကွိုးစားပွီးပွနျခပြါ။အားလုံးက ကိုယျ့ခဈြသူကိုအလှဆုံးဖွဈစခေငျြသလို တဈခြို့ကတော့ ကိုယျ့ခဈြသူဝလာရငျ စိတျပကျြတာမြိုးဖွဈတတျပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ကိုယျဝလာတယျ ကိုယျသိရငျကွိုးစားပွီးပွနျခပြါ။သူဝလာတာဆိုရငျလညျး သူ့ကိုဝလာတယျတိုကျရိုကျပွောတာထကျ gym အတူတူသှားကစားကွမလားတို့၊အားကစားတဈခုခုလုပျကွမလားလို့စသဖွငျ့ သှယျဝိုကျပွီးပွောပေါ့။အဲ့လိုမဟုတျပဲ ဝလာတယျခညျြးခဏခဏပွောနရေငျ သူ့ဘကျကစိတျအားငယျတာတှေ၊စိတျဓာတျကတြာတှေ၊ကိုယျ့အပျေါ စိတျခုတာတှဖွေဈလာနိုငျပါတယျ။ဒါမြိုးကတြော့ သှယျဝိုကျပွီးပွောတတျရတာပေါ့။ကိုယျအလေးခြိနျတကျတယျဆိုတာ ကနျြးမာရေးနဲ့မှ မညီညှတျပဲ။
လြှို့ဝှကျခကျြဆိုတာ သူ့နရောနဲ့သူထားသငျ့ပါတယျ။ကိုယျပွောမယျ့စကားက နှဈယောကျလုံးအတှကျအကြိုးမရှိဘူးဆိုရငျ စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈခံပွီးဘာလို့ပွောပွတော့မှာလဲ မဟုတျဘူးလား? ပှငျ့လငျးတိုငျးလညျး အခဈြရေးကိုမပကျြစီးအောငျထိနျးသိမျးနိုငျတာမဟုတျပါဘူး။တဈခါတဈလေ မလိုအပျတဲ့စကားတှအေမြားကွီးပွောမိတာကလညျး အခဈြရေးကိုပကျြစီးစနေိုငျပါတယျ 💕ပွီးတော့ ဒါတှကေ လိမျညာပွီးဖုံးကှယျထားတာမဟုတျပါဘူး။မလိုအပျတာတှပွေောမိပွီး အခဈြရေးကိုအဖုအထဈဖွဈမှာစိုးလို့ ကွိုတငျကာကှယျတာပဲဖွဈပါတယျ။